Intensive Reading အကြောင်းသိကောင်းစရာ - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on June 12, 2014 at 13:52 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Types of Reading အမျိုးမျိုးရှိသည့် အနက် ဤသင်ခန်းစာတွင် "Intensive Reading" ကို လေ့လာကြရအောင်။
Clare West ၏ Reading Techniques စာအုပ်၏ စာမျက်နှာ ၂၄ တွင် "Intensive reading involvesavery careful thorough reading ofatext." ဟု ဖွင့်ဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် intensive reading ပြုလုပ်ရာတွင် လိုက်နာရန် နည်းလမ်းများမှာ -
Underline or highlight words you do not know.
Look them up or work out their meaning from the context.
underline / highlight လုပ်ထားသော words များ၏ meaning ကို dictionary မှာ ရှာကြည့်၍ဖြစ်စေ၊ context စာပုဒ်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဆက်စပ်စဉ်းစား၍ဖြစ်စေ စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ညွှန်ပြထားပါသည်။
(ဤနည်းလမ်းနှစ်မျိုးအနက် dictionary မှ အဓိပ္ပါယ်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည့် ပထမနည်းလမ်းမှာ reading speed စာဖတ်နှုန်း နိမ့်ကျနှေးကွေးစေပါသဖြင့် context မှ အဓိပ္ပါယ်ရှာဖွေသည့် ဒုတိယနည်းမှာ reading skill ကို ပိုမို၍ တိုးတက်စေပါသည်။)
Try to paraphrase difficult words or group of words (ခက်ခဲသော စကားလုံးများ၊ စကားစုများကို ကြိုးစား၍ စကားပြေပြန်ကြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။)
When you come to the end, read the text again several times if necessary, until you feel you understand all of it.
Clare West ညွှန်ကြားထားသည့် နည်းများအတိုင်း "A Greener Brazil" ကို ဖတ်၍ ပေးထားသော မေးခွန်း ၆ ခုကို ဖြေဆိုကြည့်ခြင်းဖြင့် intensive reading ကို လေ့ကျင့်ကြရအောင်။
Read this text carefully and answer the questions which follow.
A Greener Brazil
Although Brazil has its share of environmental and social problems, it has its successes too. One of these is the town of Curitiba, where the authorities have shown evidence ofastrong vision and commitment to good environment practice. In the shanty towns there are no flies or litter, because there isavoluntary recycling exchange system. A constant procession of women and children bring rubbish they have collected in bags or in wheel barrows; forakilo of litter they are givenakilo of potatoes and one of bananas. So the street stay clean and people don’t go hungry.
Public transport has also been transformed. The buses are of the latest design with platforms that open out at the same time as the doors, enablingalarge number of passengers to board quickly. People buy their tickets beforehand to save time, and buses travel in their own dedicated bus lanes. These recent initiatives have reduced traffic delays in the rush hours and have encouraged far more Curitiba residents on to public transport. Many motorists now leave their cars at home and take the bus to work.
Jaime Lerner, former mayor of Curitiba is proud of what he and his colleagues have achieved. He says, “I’m convinced that every city in the world, whatever scale, whatever the financial resources, can bring aboutasignificant change in less than two years. What is needed is the will to change, and the involvement of all citizens. That’s what we had in Curitiba.
1. What words in the first paragraph mean the following?
a. area of poor housing
b. rubbish or waste
c. unpaid, not compulsory
No. 1 ၏ မေးခွန်း၌ပင် "the first paragraph" ဟူ၍ reference ပေးထားပါသဖြင့် a, b, c အဖြေသုံးခုလုံးကို first paragraph ၌ပင် ရှာရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အဓိပ္ပါယ်တူညီသည့် စာလုံးများကို လိုက်လံဖတ်ရှုကြည့်ပါက
a. "area of poor housing" ကို "shanty towns" ဟူ၍၎င်း၊
b. "rubbish or waste" ကို "litter" ဟု၎င်း၊
c. "unpaid, not compulsory" "လုပ်ခမရသော" ၊ "မလုပ်မနေရ မဟုတ်သော" စကားများနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူညီနေသော စကားလုံးမှာ "voluntary" ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
No. 1, word level ကို ကျော်လွန်၍ No.2မှ စပြီး "Wh" question words များဖြင့်စ၍ မေးထားသော မေးခွန်းများဖြစ်ပါ၍ "read the text again" ဟု ညွှန်ပြထားသည့်အတိုင်း text ကို ပြန်ဖတ်၍ main words/ key words များကို အခြေခံကာ နီးစပ်ရာ စကားလုံးများကို ထောက်လှမ်း၍ စာပုဒ်ပါ စကားလုံးများ၊ ဝါကျများကို မှတ်သားပြီး မိမိ own words ဖြင့် သင့်လျော်သလို ပြန်လည်ဖြေဆိုရပါသည်။
Who keeps parts of Curitiba clean and tidy? Why?
Question word "Who" ကို focus လုပ်၍ ရှာဖွေပါက paragraph ၌ပင် "women and children" ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး "Why" ကို အကြောင်းပြဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါ၍ "women and children" ကို ဆက်လက် ဖတ်ရှုပါက အဖြေထွက်ပေါ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ own words ဖြင့် ဖြေဆိုပါက "Women and children keep parts of Curitiba clean because they exchange litter for food." ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
What is the main advantage of the new type of bus?
"The new type of bus" ၏ advantage ကို ရှာရာ၌ "bus" ကို focus လုပ်၍ ရှာလျှင် Paragraph2"enablingalarge number of passengers to board quickly." ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Paraphase လုပ်၍ စကားပြေပြန်ရေးသားပါက "The main advantage of the new type of bus is that more people can get on quickly." ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
Which other improvements to bus travel have reduced traffic delays in Curitiba?
"traffic delay" လျော့ပါးစေရန် ဆောင်ရွက်သည့် bus travel နှင့် သက်ဆိုင်သော improvement များကို ရှာရန်ဖြစ်ပါသည်။ bus နှင့်ပင် ပတ်သက်နေပါ၍ Paragraph2ကို တဖန်ပြန် ဖတ်ရှုသည့်အခါ "people buying their tickets beforehand to save time" နှင့် "buses travel in own dedicated bus lanes" ဟူသည့် facts များကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထိုနှစ်ချက်ကို အခြေခံ၍ ဖြေဆိုပါက
"People buying their tickets beforehand to save time and buses travelling in their own dedicated bus lanes have reduced traffic delay in Curitiba." ဟူ၍ ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
According to Jaime Lerner, which two things are essential when trying to solve the problems of city life?
Jaime Lerner ၏ စကားကို quote ကို ကိုးကားထားပါသဖြင့် Jaime Lerner ပါဝင်သော paragraph မှာ Paragraph3၌ အဖြေပါဝင်ဖွယ်ရာရှိပါသည်။ "Which two things are essential?" ဟု မေးထားပါသဖြင့် လိုအပ်ချက်နှစ်ရပ်ကို ရှာပါက "the will to change and the involvement of all citizens" ဟူသည့် အချက်များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ Complete sentence ဖြင့် ပြန်ဖြေဆိုပါက "According to Jaime Lerner, the will to change and the involvement of the citizens are essential when trying to solve the problem of city life." ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
How has life improved in recent years for Curitiba residents?
ဤ question6သည် "last but not the least" ဆိုသကဲ့သို့ "Greener Brazil" တစ်ပုဒ်လုံးကို summarize ခြုံငုံဖြေဆိုရန် ဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ဖြေဆိုနည်းကို သုံးရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
"Streets are now much cleaner because of the voluntary system. Moreover, public transport is far better and initiatives introduced by the authorities have helped to reduce traffic jam."
"A Greener Brazil" ကို ဖတ်ရှုရခြင်းဖြင့် Reading skills ကို တိုးမြှင့်ပေးရုံသာမက စံနစ်ကောင်းများကို authority concerns များက Curitiba residents များအား ချမှတ် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်နှင့်အညီ citizens များကလည်း voluntary system တွင် ပါဝင်လာခြင်းဖြင့် အုပ်ချုပ်သူများနှင့် အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစားများ "ကျွန်းကိုင်းမှီ၊ ကိုင်းကျွန်းမှီ" အပေးအယူ မျှတခြင်းဖြင့် Curitiba တိုးတက်လာပုံ mayor ၏ ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည့် "everything in the world whatever the scale, whatever the financial resources, can bring aboutasignificant change in less than two years." ဟု ဖတ်ရှုလိုက်ရခြင်းဖြင့် စေတနာမှန်သော ကံတရားများကို အားကျ မုဒိတာပွါးမိပါသည်။
Permalink Reply by CHIT THU on June 12, 2014 at 18:16
Brillian. I'm very pleased to know.
Permalink Reply by Shwezinthiri on June 13, 2014 at 8:28
Thanks for the post Teacher.
Permalink Reply by Zu Zu on June 19, 2014 at 21:11
Permalink Reply by san san hlaing on February 16, 2015 at 23:17
Permalink Reply by Yin Thu Thu Aung on July 21, 2015 at 11:50
Thank you for that helpful post. Please upload more about reading !
Permalink Reply by Nyi Lwin on July 22, 2015 at 14:53
Thanks,it is useful for me..
Permalink Reply by htaylim on January 22, 2016 at 8:47